ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးအပေါ်မှာ ဘယ်လိုဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးသင့်သလဲ? - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
ကိုယ်ဝန်သည်ဇနီးအတွက် ဘယ်လိုဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးသင့်သလဲ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလသည် အမျိုးသမီးများအတွက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ.သောခံစားမှုနှင့် စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီး ဘာမဆို ခံစားလွယ်တဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေသော အချိန်တစ်ခုဖြစပါသည်။ကိုယ်ဝန်နုစဉ်ကာလမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ မူးမော်ခြင်း၊ ပျို.အန်ခြင်းတို့ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်ခြင်းကို ခံစားရတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရင်သွေးလေး လွယ်ထားရတဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်အတွက် ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ေယာက်အနေနဲ့ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ သူမရဲ့ အမူအကျင့် အချို.နဲ့ ဘယ်လို ဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ သူမက အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး
ကိုယ်ဝန်ကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ခံစားမှုတို့အတွက် အလိုက်သင့် ဆက်ဆံပေးဖို့လိုပါတယ်။သူမ အရင်ကကြိုက်နှစ်သက်ဖူးတဲ့ အစားအစာတွေ လုံးဝစားချင်စိတ်မရှိတဲ့အပေါ် မရယ်ပါနဲ့.. နေ့ခင်းအချိန်မှာ တရေးအိပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အိပ်ခိုင်းလိုက်ပါ။ သူမငိုချင်လာတဲ့အခါ နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ပါ။သူမ လိုချင်တာ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့ သင့်ဝေဖန်မှု၊ အပြစ်ပြောမှုထက် သူမခံစားချက်ကို နားလည်လက်ခံပေးမယ့်ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရင်သွေးလွယ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ပင်ပန်းလွယ်ပြီး အရင်ကထက်အနားယူချိန်၊ အိပ်ချိန် ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ အရင်က သူမလုပ်နေကျ အိမ်မှုကိစ္စ ဝေယာသစ္စတွေ ပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့ မျှော်လင့်မနေပဲအနားယူချိန်၊ အိပ်ချိန်ပိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်တွေဟာ ဒီနေ့အတွက် အစားအစာတစ်ခုကို အာသီသပြင်းစွာ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုသော်လည်း နောက်ရက်မှာ မမြင်ချင်လောက်အောင်စားချင်စိတ်မရှိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ မနေ့ကတော့ကြိုက်ပြီး ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့ သူမအပေါ်မှာ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ကိုယ်စားလိုက်တာမျိုး (သို့) ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်အတွင်း ထိုအစားအစာ ပြန်စားချင်တမျိုးလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူမ ငြင်းပယ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကို အတင်းကျွေးတာမျိုး မပြုလုပ်ပါနဲ့။ သင် သူမရှေ.မှာ စားသောက်နေတဲ့ အချို. အစားအစာတွေကို မကြည့်ချင်၊ မမြင်ချင်၊ အနံ့မခံနိုင်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရင် နားလည်ပေးလိုက်ပါ။
သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်စွာနဲ့ စကားနားထောင်ပေးတတ်တာ သိပြီးဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ မိခင်ဟာ ဗိုက်ထဲကကလေး အဆင်မှပြေပါ့မလား၊ ငါဟာမိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား၊ ကလေးကရောငါ့ကို ချစ်ပါ့မလား၊ ကလေးမီးဖွားရတာကော အဆင်ပြေပါ့မလား စတဲ့ လားပေါင်းများစွာနဲ့ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ.ခြင်းဟာ ပုံမှန်ထက်ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ခံစားလွယ်ပတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်ကလေးက ဗိုက်ထဲမှာကန်တာမျိုး၊ အန်ထရာဆောင်းရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် သူမရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မျှဝေခံစားပေးလိုက်ပါ။
၅။ ဆရာဝန်နဲ့ တွေ.ဖို့ Appointment အတွက် အဖော်ပြုပေးပါ
အမြဲတမ်းမလိုက်နိုင်ရင်တောင် ၂ခေါက်လောက် လိုက်သွားပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ငါးလအရွယ်မှာ ကလေးနှလုံးခုန်သံကြားရတဲ့ အန်ထရာဆောင်းရိုက်ချိန်နဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်လိုမျိုးပါ။အကယ်၍ သင်အလုပ်ရှုပ်နေလို့လိုက်မသွားဖြစ်ခဲ့ရင် အနည်းဆုံးတော့ ဒီနေ့ Appointment ဘယ်လိုနေလဲ စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းပေးပါ။
၆။ အနာဂတ်အတွက် အတူတူ တိုင်ပင်ဆွေးပါ
ကိုယ်ဝန်သည်မိခင်လောင်းတွေမှာ များစွာသော အစီအစဉ်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးကို နာမည်ပေးဖို့၊ ကလေးအဝတ်အထည်အသုံးအဆောင်ဝယ်ဖို့၊ ကလေးအခန်းအတွက် အိပ်ယာ၊ အသုံးအဆောင်ဝယ်ဖို့ တဲ့ အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူမကလေးမွေးပြီးလို့ အလုပ်ခွင်ပြန်ဝင်မယ်ဆို နေ့ကလေးထိန်းငှားဖို့လဲ ကြိုတင်စီစဉ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ကလေးအသုံးအဆောင်ပရိဘောဂများ နေရာချခြင်း၊ ကလေးအခန်းဆေးသုတ်ခြင်းစတာတွေအတွက် သင်မပါလို့ မဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေလဲ ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ကလေးနာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲ ရွေးတဲ့အချိန်ကတော့ (၂) ယောက်လုံး စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနွယ်ခြင်းနှင့်အတူ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း စတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာခြင်းကို ခံစားရပါတယ်။ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး နည်းနည်းလောက် အလိုလိုက်ပေးလိုက်ပါ။ နှစ်ဦးတည်း ချစ်သူဘ၀ Date လုပ်တုန်းကလိုပဲအရသာရှိတဲ့ ညစာ ထွက်စားတာတို့၊ ကိုယ်ဝန်သည်တွေအတွက် အထူး Body Massage လုပ်ပေးတာတို့၊ သူမခြေထောက်ကို ပွတ်သပ်ပေးတာတို့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ သူမအတွက် စိတ်ကြိုက်ဈေးဝယ်ပါစေ။
၈။ ကလေးမွေးဖွားဖို့ သင်တန်းတက်တဲ့အခါ အဖော်ပြုပေးပါ
သူမဟာ သဘာဝအတိုင်းမွေးဖွားဖို့ စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ရင် သင်တန်းတက်ကို တက်သင့်ပါတယ်။ သင်တန်းကောင်းတွေက ကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ စတဲ့ သင်ခန်းစတွေပေးတတ်ပြီးအန္တာရယ်ကင်းစွာနဲ့ လွယ်ကူစွာ မွေးဖွားနိုင်မှာပါ။
၉။ ဘယ်လိုပုံစံနည်းလမ်းသုံးပြီး မွေးဖွားချင်လဲ သိထားသင့်ပါတယ်
ကလေးမွေးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ကလေးကို အပြင်ရောက်စေမလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ရင်သွေးလေးအပြင်ရောက်ဖို့ အသည်းအသန်အခြေအနေမှာ သူမအနေနဲ့ဘာတွေမေးနေလဲ ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာ ပြန်ဖြေဖို့ စိတ်ဝင်စားမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမဟာ ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမွေးဖွားဖို့ စိတ်အားထက်သန်လဲဆိုတာ သင့်အနေနဲ့ ကြိုသိထားရင် မွေးဖွားပေးမယ့်ဆရာဝန်မလာခင်မှာ အနည်းဆုံး တာဝန်ကျ နာစ့်တွေကိုတော့ကြိုတင်အသိပေးနိုင်မှာပါ။
၁၀။ မီးဖွားနေစဉ်မှာ တတ်သလောက်ကူညီပါ
မီးဖွားနေစဉ်မှာ မိခင်ဟာ ရှိသလောက်အားအစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးရတဲ့ အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ စောမွေးမယ်ဆိုရင်တော့ သူမဘေးမှာအဖော်ပြုပြီး ဟာသအချို.တောင်စိတ်သက်ရာရအောင် ပြောပေးနိုင်ပေမယ့် သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကျမှ မီးဖွားတယ်ဆိုရင်တော့ မိခင်အနေနဲ့ နာကျင်မှုကြောင့်ကြိတ်မှိတ်ညည်းညူတာမျိုး၊ အဝတ်မကပ်ချင်တာမျိုး၊ ဘေးမှာရှိနေတဲ့သူတွေကို စိတ်မရှည်တာမျိုး၊ သီချင်းသံနဲ့မီးဖွားချင်တာမျိုး နဲ့ ဘာသံမှ မကြားချင်ပဲ တိတ်တိတ်နေချင်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မောပန်းခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းကြောင်း သူမကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်မှု လွတ်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သွေးလေးမျက်နှာမြင်ရချိန်မှာတော့ သူမဟာပျော်ရွှင်မှုအပြည့်နဲ့ ရင်သွေးလေးရဲ့ မေမေဘဝကိုရရှိသွားပြီး နောက်ရက်အတော်များများဖြတ်သန်းပြီးချိန်မှာ ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အရင်တုန်းက (ကိုယ်ဝန်မရှိခင်တုန်းက သူမ) ကို သင်ပြန်လည်မြင်တွေ.နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(babble-com မှ Artical အား Your Fitster Teamမှ ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်သည်)
ကျန်းမာရေးအလွအပနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေသိစေဖို့ Like & Share လုပ်ခြင်းဖြင့် မျှဝေလိုက်ပါအုံးနော် ]
<3 sharing is caring